News - Dayactirka iyo Talooyinka Dayactirka Balanbaalis Madax
A waalka balanbaalis waa nooc ka mid ah qalabka xakamaynta socodka, oo ay ku jiraan disk wareegsan si uu ugu shaqeeyo dareeraha qulqulaya hawsha. Meesha taagan ee waalka balanbaalisku, waxaa ku jira saxan bir ku dhisan oo ka shaqeysa teknolojiyadda xiritaanka dheecaanka socda. Hawlgalka xirida waalkaani wuxuu si sax ah ula mid yahay hawlgalka xirida waalka kubada.
Marka la barbardhigo qalabka wax lagu duubo ee sabeynta, waalkaani wuxuu leeyahay faa'iidooyinka soo socda:
Miisaan fudud; sidaa darteed uma baahna taageero badan.
Marka la barbardhigo filtarka kale ee la midka ah ee leh naqshado kala duwan, qiimahiisu wuu ka hooseeyaa.
Waalka balanbaalis waa waalka lagu kalsoonaan karo iyo dhow-ku habboon-laba waalka, kaas oo si ballaaran loo isticmaalo cuntada, dhismaha maraakiibta, iyo warshadaha kale. Marka la barbardhigo filtarka kale, rakibidda qalabka balanbaalista waa hubaal hab kharash-ku-ool ah. Iyadoo la xirayo saxanka, waalka balanbaalisku wuxuu kaloo door ka ciyaari karaa hagida socodka iyo xirida dareeraha / gaaska.
Sidee loo dayactiraa loona dayactiraa fallaaraha balanbaalis ee dhuumaha kala duwan?
Tilmaamaha soo socda ee loogu talagalay dayactirka waalka balanbaalka ayaa lagu siin karaa si aad u tixraacdo:
Walxaha balanbaalisku waxay u baahan yihiin dayactir joogto ah iyo dayactir ka dib markay ka shaqeeyaan deegaanno kala duwan oo shaqo muddo ah. Dayactirka guud waxaa loo qaybin karaa dayactir yar, dayactir dhexdhexaad ah, iyo dayactir culus.
Falanqaynta gaarka ah waxay kuxirantahay xaaladaha deegaanka ee dhuumaha. Sababtoo ah warshadaha kaladuwan waxay u baahan yihiin dayactir iyo habab dayactir oo kala duwan, tusaale ahaan, dayactirka dhuumaha ee shirkadaha batroolka, cadaadiska dhuumaha ayaa looga baahan yahay inuu ka hooseeyo PN16MPa, heerkulka dhexdhexaad ahna wuxuu ka hooseeyaa 550 ° C. Xaalado dayactir oo kaladuwan ayaa looga baahan yahay warbaahinta kaladuwan ee jireed iyo kiimikada.
Nidaamka dayactirka yar ee qasabadaha balanbaalisyada kaladuwan ee kaladuwan, oo ay kujiraan nadiifinta muraayadaha iyo koobabka saliida, bedelida o-ring, nadiifinta dunta iyo faleebada, ka saarida qashinka kujira waalka, xoojinta boolal, iyo qaabeynta lugo wareega. Kuwaas oo dhan waxaa loo isticmaali karaa sidii dayactir jadwal ah. Dayactirka dhexdhexaadka ah: oo ay kujiraan walxaha dayactirka yar, bedelida qeybaha nadiifka ah, hagaajinta jirka waalka, sanding of shaabadaha, waalka toosinta, iwm Waxyaabahan waxaa loo isticmaali karaa dib u habeyn warshadda. Dayactir culus: Waxaa ka mid ah mashruuca dayactirka bartamaha, bedelka qalabka jirridda, hagaajinta qaansooyinka, bedelka ilaha iyo shaabadaha Marka kuwani loo baahdo, waalka balanbaalisku wuxuu la kulmaa dhaawac aad u weyn.
Si looga hortago miridhku iyo saliidaynta, filtarka balanbaalisku waa in si sax ah loo ilaaliyaa.
Dusha sare ee waalka, waxaa ku jira saliid saliideed oo saliideysa. Tan waxaa laga yaabaa inaan la arkin markii waalka yimaado. Hubso inaad dufan ku qoroto qoorta waalka wakhti go'an illaa inta dufanka badan ka baxayo.
Sanduuqa 'gearbox', waxaad ku isticmaali kartaa dufan ku saleysan lithium dayactir.
Waxaad u isticmaali kartaa shey kasta oo saliid ku saleysan / saliid si aad si fudud ugu nadiifiso dhammaan qeybaha waalka.
Haddii aadan u adeegsanin si joogto ah, fadlan isku day inaad rogto ama aad baaskiil ku wadatid waalka subagga bishiiba mar.
Waxaan nahay shirkado balanbaalis balanbaalis. Fadlan si xor ah u nala soo xiriir haddii aad xiiseyneyso alaabtayada.